France neUK vachange vaine Apple Watch Series 3 LTE iri kutengeswa musi wa22 / 9 | Ndinobva mac
France neUK vachange vaine Apple Watch Series 3 LTE iri kutengeswa musi wa22 / 9
Ichi ndicho chinhu chatave nenguva tichiona munyika medu uye ndechekuti muFrance iri pakati penyika dzekutanga kuve ne smart wachi ine rondedzero yayo huru, inova yekubatanidza kweLTE. Parizvino, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kune nyika dzinoverengeka dzinozokwanisa kunakirwa neichi chishandiso chitsva, asi pano ichave nguva yekuenderera mberi uchimirira chibvumirano neanoshanda.
MuUnited Kingdom ivo zvakare vanozove neApple Watch Series 3 ine LTE iripo uye isu takawana mutsauko mumitengo inoenderana neiyo mamwe maApple zvishandiso akatengeswa munyika mbiri idzi. Muchidimbu, kune avo vanoronga kutenga Apple Watch uye vanogona kuenda kuFrance kana England zvingave zvinonakidza kuita kutenga ipapo.
Izvi zvinondiyeuchidza nezvekutanga kweiyo yekutanga Apple Watch modhi umo vashandisi vazhinji vakatanga kutenga kubva kune nyika yakavakidzana uye kugadzirisa zvigadzirwa zvepamhepo muUnited Kingdom neGerman kunakidzwa pamberi peiyo ichangoburwa Apple Watch. Iye zvino chimwe chinhu chakafanana chinogona kuitika kana tichida kuva nemuenzaniso uyu neLTE, zvirinani processor uye nedzimwe nhau, kunyangwe chiri chokwadi kuti iyo modhi isingafarire LTE ichavepo kuti ichengetedzwe Chishanu chinotevera.
Iyo French Apple Tarisa LTE
Isu tinofungidzira kuti uku kutenga hakufanirwe kuve nedambudziko rakakura pane kusvika kuchitoro, kuona stock uye kuvhura iyo kutenga, asi isu tinofanirwa kujekesa kuti muFrance, chete Orange parizvino inoenderana neyekupfeka Apple kunyangwe hazvo mabhendi eLTE akafanana muEurope - 800, 1800 uye 2600 MHz - unofanirwa kubvunza kare.
Kuziva mushe usati waita kutenga uku kwakakosha nekuti isu hatizive kana ichizoshanda nevamwe vanoshanda kana kuti ichasungirwa kugara panguva yekutenga, nezvimwe.. Pano tinosiya iyo runyorwa rwevanoshanda nenyika iyo ichave iinayo svondo rinouya.
Kune rimwe divi, mutengo weApple Watch neLTE wakafanana kuUnited Kingdom sekuUnited States, asi kuFrance kunodhura kupfuura inoratidza kuti kuSpain ichave zvakare kana vachizarura kana vakasvika pakubvumirana nevashandisi vakasiyana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » France neUK vachange vaine Apple Watch Series 3 LTE iri kutengeswa musi wa22 / 9
Enzanisira zvinyorwa zvako ne Graphics, izvozvi zviri kutengeswa
Ruzhinji rwemakambani ekugadzira richagadzirisa zvemukati ma4k yeApple TV itsva, kunze kweDisney